Xalayaa Obboo Lammaa Magarissaa Afiyyaa’ii Caffee Oromiafi -
By Jawar Mahammed:
Haasaya isin uummata Burraayyuu waliin gootan dhaggeeffannee jirra. Hunda dura nama akka keessan onneerraa dubbatee garaa saba isaa jiisu mooraa gamasii keessatti arguunuu waan guddaadha, ammas ija hamaa sirraa ha qabu jenna. Itti aansuun dhimmoota lama isin kaaftanirratti yaada kennuun barbaada.Dhimma Maastar Pilaanii Finfinnee ilaalchise ‘ummanni Oromoo yoo hin barbaanne hojirra hin oolu’ jettan. Bar wanni ‘yoo’ jedhan hin jiru. Ummanni ifaan ifatti akka mormu irra deddeebi’ee ibseera. Waggoota lama dura ilmaan Oromoo 78 lubbuu isaanitiin, dhibbatamni dhiiga isaaniitiin, kumaatamni ammoo walabummaa isaa mana hidhaatti dhabuun mamii tokko malee mormuun ejjannoo isaanii isiniif ibsanii jiran. Dabalataanis hayyoonni Oromoo addunyaa guutuurraa miidhaa Maastar Pilaanii kanaa qorannoo bifa hedduutiin mirkaneessanii jiran. Akkasumas miseensonni keessanuu waltajjii garaagaraa irratti ifatti Maastar Pilaanii kana mormanii jiran. Kanaafuu ‘yoo’ wanni jedhamu wanti hafe hin jiru. Isiniif Caffeen Oromiyaa isin hooggantan dhuguma yoo uummataaf dhaabbate ifatti as bahee Maastar Pilaanii kana dhaabaa!
Dhimma labsii magaalota Oromiyaa ilaalchisee ‘dogoggorri yoo jiraate nutu seera baase, jijjiiruufis aangoo guutuu qabna’ jettanii jirtan. Rakkoo labsichi qabu bifa armaan gadiitti tarreessuun akka jijjiirtan isin gaafanna.
Previous DHIIGA BARATTOOTAA
Next Waamicha Hiriiraa Mormii tokkuumma baratoota Oromoo (TBOJ) caayya ABO/OLF biyyaa Jarmanii, Frankfurt